နာရေးကူညီမှု အသင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမည့် အစီစဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လိုက်ပါလှူဒါန်းနိုင်ရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နာရေးကူညီမှု အသင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမည့် အစီစဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လိုက်ပါလှူဒါန်းနိုင်ရန်
နာရေးကူညီမှု အသင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမည့် အစီစဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လိုက်ပါလှူဒါန်းနိုင်ရန်
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Feb 3, 2012 in Copy/Paste | 48 comments
သို့ ။ ။ မန္တလေးဂေဇက် အဖွဲ့ဝင်များ၊ စာဖတ်သူများနှင့် အလှူရှင်များ နေ့စွဲ – ၃-၂-၁၂
အကြောင်းအရာ ။ ။ နာရေးကူညီမှု အသင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမည့် အစီစဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လိုက်ပါလှူဒါန်းနိုင်ရန် ။
မန္တလေးဂေဇက်ဧ။် ပထမဆုံး အလှူကို နာရေး ကူညီမှု အသင်းသို့လှူဒါန်းမည်ဟု ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း လူအများရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သော (၁၂-၂-၁၂)တွင် သွားရောက်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ရာ အတူလိုက်ပါလှူဒါန်းလို သူများ အနေဖြင့် 0973114322 ကျွန်တော်ရွှေတိုက်စိုး နှင့် 0973144421 etone ဆီသို့ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၊ ယခုပို့စ်အောက်တွင် ကော့မန့် အနေဖြင့်လည်းကောင်း ၁၀-၂-၁၂ နောက်ဆုံးထားပြီး စာရင်းပေးသွင်းကြပါလို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ် ။ လိုက်ပါကုသိုလ်ယူကြမည့် လူဦးရေပေါ်မူတည်ပြီး ကားငှားသင့် မငှားသင့် စီစဉ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် သေချာစွာ စာရင်းပေးကြပါရန် နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ် ။ အတူလိုက်ပါ ကုသိုလ်ယူလိုသည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင် မန်ဘာ ၊ စာဖတ်သူများ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ဧ။် ကားပေါ်တွင် မျှတင်သွားကြပါရန် ၊ နှိုးဆော် ဖိတ်ကြားလိုက်ရပါတယ် ။
နေ့ရက် ။ ။ 12-2-12 (တနင်္ဂနွေ)
အချိန် ။ ။ မနက် 10 နာရီ အရောက်
နေရာ။ ။ ( ယခင် RC3 )အမှတ် (၃) အခြေခံ ပညာ ဦးစီးဌာန ။ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊
လမ်းညွှန်။ ။ ရိုးရိုးကား ၃၃၊ ဒိုင်နာ ၉၇ ၊ ဟိုင်းလက် ၃ အဖြူ ၊ ဟိုင်းလက် ၃၈ ၊ အထူး (အဓိပတိ)အ၀ါ ၊ အထူး ၂၁၀၊ အထူး ၃၄ တို့ကို စီးပြီး ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းပါ ။
အပြင်ထွက်ဖို့ မအားတာနဲ့ကျနော့် အလှူငွေပိစိလေး ခုထိ မပေးရသေးဘူးဂျာ
လှူမဲ့ ပမာဏနဲတာကြောင့်လဲ မဆက်သွယ်ဖြစ်တာလဲ ပါပါတယ်..
၈မိုင်ဘက် လူကြုံရှိရင် ၀င်ယူသွားနိုင်ပါတယ်..သို့ မဟုတ်
သွားမဲ့နေ့ ကျရင် လိုက်တော့ မလိုက်တော့ပါဘူး..
အားတက်သရော ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လူတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ..
M လုလင် လမ်းကြုံလို.လာယူမယ်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ စိတ်ချပါ အလှူငွေနည်းနည်းများများ စိတ်က အဓိကပါဗျ..
လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုးလေး ကို ဘဏ်နဲ့ ပို့ ပေးရင်ဖြစ်ဖြစ်
လေယာဉ်လက်မှတ် ကို ကားဂိတ် နဲ့ ပေးလာရင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်
လူကိုယ်တိုင် ပေးရင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်
ဟီဟိ…ဖြစ်ချင်တာ ကို ပြောပါတယ်
ဒါမှန်သိ ကျွန်တော်ပြန်တုံးက suitcase ထဲခေါက်ထည့်ခေါ်လာပါတယ်ဗျာ
သူရင်းက ဝလို့ လှလို့ပါလား
အေးကွာ သယ်ရင်းရန်ကုန်လာလဲ အကြောင်းကြားအုံးနော်…. အလုပ်က မအားလို.ဆောရီးပါကွာ….
နောက်တစ်ခါ သေသေချာချာအေးအေးဆေးဆေး တွေ.ကြတာပေါ့
်အမှန်တကယ် လိုက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မအားတာကြောင့် မလိုက်နိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။
မောင်ရင်တို့ မမိန်းကလေးတို့က လုပ်အားအလှူပါ ပါသမို့
အဝေးမှ မုဒိတာ ထား မေတ္တာပွါး ကာ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါထက်မက တိုးပြီး ကုသိုလ်ပြုနိုင်ရန်လဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
မန္တလေးဂေဇက်မှ… နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့.. အယ်လ်အေလည်း.. လာပါဦးလို့နော…။
ဗျို့ သဂျီးရေ .. သဂျီး .. နိမ်းကဒ်ပေးလိုက်မယ်လေ … ဟဲဟဲ …
ကျုပ်ကဒ်က.. ကျုပ်လက်နဲ့သူ့ကို အယ်လ်အေရောက်တုံး ပေးဖူးပါတယ်..။
အခုရက်ပိုင်းတင်… မန္တလေးဂေဇက်နာယက ဒေါက်တာဇော်ထွန်း ရန်ကုန်ရောက်တုန်း ၅၀၀ လှူလိုက်သေးတယ်..။
မနိုရဲ့ ကားမှာ လူငါးရောက် တင်သွားပေးလို့ ရပါတယ်
အရေးပေါ်ကစ်စရှိလို့ မလိုက်ဖြစ်ရင် 10ရက်မတိုင်ခင် ပြန်အကြောင်းကြားပါ့မယ်
မနို ဖုန်းပြောနေရင် လိုင်းအောက်သွားလို. ဆောရီးပါ…. နော်
စာရင်းသွင်းသွားပါတယ် ရှင် ..
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မလိုက်ဖြစ်လျှင် etone ကနေတစ်ဆင့်
အဲဒီလိပ်စာလေးက များတို့အိမ်နားလေးမှာပါလား။ ဒါပေမဲ့ များတော့မလိုက်နိုင်သေးဘူးကွယ်။ ဆောရီးပါနော်။ ဦးဆောင်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း….
ကိုေ၇ွှတိုက်စိုး၊မအီတုံး တို့ရေ၊ ကျနော်ကတော့ အားခဲထားပေမည့် ဒီတစ်ခေါက်လွဲပြန်ပါပြီဗျား။
(၆)ရက်နေ့မှာပဲ မားကက် ဆာဗေး နဲ့ နယ်ကို လားလီဘို့ ပါဗျား။(ရခိုင်ဘာသာဖြင့်)သွားရမယ်လို့ပြောတာ။
လေးပေါက်ကတော့ မလာနိုင်တာသေချာလို့ ရန်ကုန်မှာကတည်းက ခွင့်တောင်းထားခဲ့ပါတယ်။
အမှတ်စဉ် တစ်ကတော့ အောင်မြင်သွားပါပြီ။
အမှတ်စဉ်နှစ်ကို ဒီဇင်ဘာလောက် မှန်းထားလိုက်ကြရအောင်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
နောက်အကျဆုံး သီတင်းကျွတ်လောက် ဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာ။
စိန်ပေါက်ပေါက်ကို ရှင်ပြု မယ်လေ။
လူများများနဲ့ သွားကြမယ် တွေးထားပေမယ့် .. မင်္ဂလာဆောင်တွေ တိုက်နေတာကြောင့် .. လိုက်ပါမယ့်လူ .. နည်းနေသေးတာ တွေ့ရပါတယ် … ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း .. အဲ့ဒီနေ့ … မင်္ဂလာဆောင် သုံးခုသွားဖို့ ရှိပေမယ့် .. စထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ … အဆင်ပြေပြေ ပြီးဆုံးအောင် မင်္ဂလာဆောင်တွေ အကုန်လုံး cancle လုပ်ထားခဲ့ရမယ်ထင်တယ် … ။
ဆောင်ပဲ ဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ လူဒွေ .. ဟွန်း
အောင်မယ်အောင်မယ်။ မနာလိုဖြစ်နေပြီလာ့။ အဲဒါဆိုလဲကိုယ်တိုင်ပဲ————-။ ဟဲဟဲ
ဟွန်း … အစ်မနော် … အထင်စမောတယ်ပေါ့ … ။
လာမယ် … လာမယ် … လာပါဦးမယ် … ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ဒီထက်ပို တက်သွားမှ … ဟဲဟဲ … တွက်ချေကိုက်မယ့် အချိန်စောင့်နေတာ … ဟီး ဟီး …
အေးပါအေးပါ။ ၀ီစီနဲ့နားကြပ်ရောင်းလိုက်ပါအုံး။ ဟဲဟဲ
မင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့ ရှိနေလို့ အတူတူတော့ ကားလိုက်မစီးနိုင်ပေမယ့် လှူမယ့်နေရာကို ရောက်အောင်တော့ လာခဲ့မယ်။ အားလုံးကိုတွေ့ချင်တယ်။ etone ရေ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မရို့စ်ရေ …. ။ လှူမယ့်နေရာကို တိုက်ရိုက်လာစောင့်နေမယ့် ရွာသူ ရွာသားတွေလည်း ရှိပါတယ် … ကိုကြောင်ဝတုတ်၊ အမတ်မင်း ၊ ကို သူရဇော်တို့ပါ ရောက်နှင့်နေကြမှာပါ … ။
ဆူး ဒီတလော ခြေရှည်တာများလို့ အလုပ်တွေ လုပ်ရမှာ တန်းစီ စောင့်နေလို့ လုပ်ရမှာမို့.. မလိုက်နိုင်ကြောင်း ကြိုတင် အစီရင်ခံအပ်ပါသည်။
တခြား လိုအပ်တာများ ရှိရင်ကူညီနိုင်တာ ကူညီပေးပါ့မယ်။
ကျွန်ုပ် သူရဇော် သည် အပေါက်ဝမှ စောင့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း………….
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတော့ ရွာသား ကိုသူရဇော်မှန်းသိအောင် ပန်းရောင်ဝမ်းဆက်လေး ၀တ်လာပေးနော်……..
အလကားစတာပါ… အပေါက်ဝရောက်ရင် တွေ.တဲ့သူအကုန် တင်ခေါ်မှာပါ….
အပေါက်ဝရောက်ရင် တွေ.တဲ့သူအကုန် တင်ခေါ်မှာပါ…:D
ကြည့်လဲလုပ်အုံးနော့။ အပေါက်ဝမှာတွေ့တဲ့သူတွေကဘတ်စ်ကားစောင့်နေတာဖြစ်နေအုံးမယ်။ မတော်ကားချောင်တယ်ဆိုတက်လိုက်လာမှ။
ကျွန်ုပ်သူရဇော် ကိုကျော်သူတို့ ရှေ့တည့်တည့်မှ ငူငူကြီး ထိုင်စောင့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ခပ်ချောချော ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်ဟု မှတ်ယူနိုင်ပေသည်……
ကျွန်တော့် တစ်ယောက်စီးကားနဲ့လာမှမို့ မည်သူမှမခေါ်နိုင်တာခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ လိုက်လို့မဖြစ်နိုင်လို့
ယခုလက်ရှိထိ လှူဒါန်းရန်လျာထားငွေ ကိုးသိန်းကျော်ရှိပါသည် ။
ပြည်ပမှ ပေးပို့ လှူဒါန်းမည့်သူများလည်းရှိသေးပြီး အလှူငွေလက်ထဲမရောက်သေးပါသဖြင့် … စာရင်းထည့်မပေါင်းရသေးပါဘူး ။
အလှူငွေလက်ခံပိတ်ပြီး အလှူငွေစာရင်းချက်ချင်းထုတ်ပြန်ပေးရန် စဉ်းစားထားသော်လည်း အလှူငွေလက်ခံပိတ်သည့် (10-Feb) နောက်ပိုင်း 11ရက်နေ့ထိ ထည့်ဝင်ရန် ဆက်သွယ်ထားသူများရှိသေးသဖြင့် … အလှူငွေလှူဒါန်းသူအမည်နှင့် ကောက်ခံရရှိငွေ အသေးစိတ်ကို 13ရက်နေ့မှသာ အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည် ။
ကောက်ခံရရှိသမျှအလှူငွေအားလုံးကို လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည် ။
ကျမလဲ အလှူကိုလိုက်ပါမယ်။ ကိုယ်ပိုင်အစီစဉ်နဲ့မှီအောင်လာခဲ့ပါမယ်။ အပြောင်းအလဲရှိရင် မ etone ကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပါမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ မရွှေအိရေ … လာမယ်ဆိုလျှင်စောင့်ပါမယ် … ကျွန်မတို့ ချိန်းထားတဲ့နေရာကိုစောပြီးရောက်နေမှာပါ … ။ တစ်ခုခု အခက်ခဲရှိလျှင် ခုဏန SMS ပို့တဲ့ဖုန်းကို လှမ်းခေါ်လို့ ရပါတယ် ။
လိုက်မယ် လှူပါမယ် ၁၀ နာရီစထွက်မှာလား..။
ဟုတ်ကဲ့ .. ဆယ်နာရီ စထွက်ပါမယ် .. လိုက်မယ်ဆိုသူတွေ ကျိန်းသေလာမယ်ဆိုလျှင်တော့ .. ခဏစောင့်ပေးပါမယ် .. ကျွန်မတို့ ဖုန်းတွေကို ခေါ်ပြီး … ဘယ်သူလိုက်မလဲဆိုတာ စာရင်းပေးထားပါ .. ။
လိုက်မယ့်သူနဲ့လှူမယ့်သူနဲ့ အားရစရာကြီးပါလား။ ၀မ်းသာစရာပဲ။တို့ ရွာသူရွာသားတွေ တကယ်သဒ္ဒါမချို့ဘူးပဲ။
လိုက်ချင်လိုက်တာဗျာ။ ရန်ကုန်ကို လာဖို့က မလွယ်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအလှုဖြစ်မြောက်အောင် ဝိုင်းဝန်းခဲ့ကြသောသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလှုရှင်တွေ အားလုံး အလှုကြီးတွေ ဆက်တိုက် လှုနိုင်ကြပါစေဗျာ။
မအိတုံ နှင့် ကိုရွှေတိုက်စိုးရေ ကျနော်ရွှေဘိုသား 11 ရက်နေ့ လာလှူမယ်မှန်းထားသောလည်း ဘယ်လိုမှ လာလို့ မရသောကြောင့် မလာဖြစ်တော့ပါ ဖုန်းဆက်ပါအုံးမည်
ဟုတ်ကဲ့ လိုက်ပါလှူဒါန်း ပါမယ် လို့